Volana tsy mandalo fa mitoetra… - ewa.mg
Volana tsy mandalo fa mitoetra…
News - Volana tsy mandalo fa mitoetra…
anatin’ny iray volana ho an’ny teny malagasy izao. Toy ny
isan-taona. Mby aiza? Tsy hita loatra izay tena fihatsaran’ny
fandalana sy ny fikajiana ary ny fiarovana ny tenindrazana na
tenin-dreny. Ndeha hanaratsy tena amin’izany ve? Iaraha-mizaka izay
mitranga sy iainana isan’andro. Ahoana, ohatra, ny fanajana ny teny
amin’ny fandefasana hafatra amin’ny finday, ny
Eny, na amin’ny teny mita sy
amin’ny kabarim-panjakana aza, firifiry, ohatra, ny miteny hoe
“afaka atao”, “afaka tenenina”… ? Nefa ny marina: “azo atao”, “azo
tenenina”… Tsy fahalalana ny fahadisoana? Na tsy fisian’ny
fanitsiana, na tsy firaharahana, na fahazaran-dratsy… Maro ny azo
tanisaina, hatreto (milaza toerana). Mbola fahadisoana koa izay:
maro ny azo tanisaina hatramin’izao (milaza fotoana)…
Saingy, toa ireharehan’ny sasany,
sanatria, ny fahadisoana na ny tsy fahaizana teny malagasy? Na tsy
manahirana, tsy mahamenatra, toa fahamboniana aza. Raha teny vahiny
no diso tsy nahy, aoka fotsiny… Misy koa manamarin-tena na
mialokaloka amin’ny hoe tsy mazava izay tian-kolazaina, raha teny
malagasy no ampiasaina. Dia vao mainka tsy ho azo mandrakariva ny
teny malagasy rehefa tsy ampiasaina.
Miaina ny teny: velona, mitombo,
simba, mety ho faty… Arakaraka ny fampiasana azy izay: tandremana
sy kajina amin’ny fifandraisana amin’ny teny hafa tsy atao
rapa-dango, tsy arovana fahatany koa ka itokana-monina ka lasa
mahantra am-pitoerana… Mihazakazaka ny fiainan’izao tontolo izao
amin’ny lafiny sy ny sehatra samihafa amin’ny hoe fandrosoana, mila
maharaka sy mifanaraka amin’izany ny teny.
Amin’izao iray volana izao ve no
mba itenenana sy ahatsiarovan-tena ny maha zava-dehibe ny volana na
ny teny? Nefa ny volana na ny taona, mandalo fa ny volana na ny
teny, mitoetra: miantoka ny aina sy ny fanahin’ny firenena amin’ny
famolavoana ny maha olona, miantoka ny fifandraisan’ny samy olona…
Avela mandalo fotsiny àry ve izao volana anomezan-danja ny volana
izao? Mila anaovana dingana…
L’article Volana tsy mandalo fa mitoetra… a été récupéré chez Newsmada.
MJS-Fitsinjovana ny mpiasa: faritra telo nanaovana fitsidihana
Toy ny efa fanaon’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena sy araka ny baiko avy amin’ny minisitra Tinoka Roberto, mitohy hatrany ny fidinana ifotony. Fitaleavam-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena telo ny notsidihin’ny tale misahana ny maha olona eo anivon’ny minisitera, ramatoa Hanitriniaina Lynda sy ny mpiara-miasa aminy, ny herinandro lasa teo. Voakasik’izany ny faritra Matsiatra Ambony, ny any Manakara, faritra Vatovavy Fitovinany, ary ny any Farafangana, faritra Atsimo Atsinanana. Misy ny tanjona amin’izao fidinana ifotony izao, raha ny fanazavana. Isan’izany ny fijerena ireo mpiasa tena miasa eo anivon’ny minisitera ahafahana mamantatra sy mahalala ireo “fonctionnaires fantômes”. Marihina fa tafiditra anatin’ny paikadin’ny fitondram-panjakana ity fanafoanana ny mpiasam-panjakana matoatoa ity. Ankoatra izay, nisy ny fampiofanana sy ny fampahafantarana mahakasika ny asam-panjakana sy ny zo tokony hositrahin’ny mpiasa ary ny sazy miandry ho an’ireo tsy manara-dalàna. Vonona hatrany hihaino ny hetahetan’ny mpiasa ny minisitera ka nisy, araka izany, ny fihainoana ny olana misy eny ifotony ahafahana manampy ireo mpiasa.Tsy nanadino ny nisaotra ny minisitra Tinoka Roberto ny mpiasa eny anivon’ny DRJS misy ireo faritra telo notsidihna ireo, amin’ny tsy fanadinoana sy ny fitsinjovana azy ireo. Nifarana ny 12 febroary lasa teo ny fitsidihana ireo faritra telo ireo ary mbola hitohy any amin’ny faritra hafa kosa izao fidinana ifotony ataon’ny MJS izao, izay ezahina hahazo ny anjarany avokoa ny faritra tsirairay manerana ny Nosy. Mi.RazL’article MJS-Fitsinjovana ny mpiasa: faritra telo nanaovana fitsidihana a été récupéré chez Newsmada.
Toby Ratsimandrava: jeneraly efatra natao veloma handeha hisotro ronono
« Gendarme hier, gendarme aujourd’hui, gendarme toute ma vie ». Izany ny teny fisaorana sy fanaovana mandra-pihaona ary fankaherezana natolotra ireo manamboninahitra jeneraly efatra handeha hisotro ronono rehefa nahavita ny fanompoana tanindrazana teo anivon’ny Zandarimaria. Notontosaina, omaly maraina teny amin’ny Toby Richard Ratsimandrava, ny lanonana ara-miaramila fitsofan-drano ireo jeneraly hisotro ronono: ny Jly Ranaivoson Gabin, ny Jly Rakotomahanina Harimanantsoa Florens, ny Jly Tsirivelo Nicolas ary ny Jly Andriamanana Solofonirina Maherizo. Lanonana teo ambany fiahian’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jly Rakotonirina Richard, sy ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena (Seg), ny Jly Ravalomanana Richard, ary ny ComGN, ny Jly Andrianjanaka Njatoarisoa. Nisy ny fanolorana mari-pankasitrahana noho ny andraikitra sy ny adidy nosahanin’izy ireo nandritra ny fotoana niasany teo anivon’ny Zandarimaria. Natao izao lanonana ara-miaramila izao hitohizan’ny firahalahiana amin’ireto jeneraly hisotro ronono ireto sy ireo mbola am-perinasa, hisian’ny firaisam-po sy firaisan-tsaina eo amin’ny roa tonta.Jean ClaudeL’article Toby Ratsimandrava: jeneraly efatra natao veloma handeha hisotro ronono a été récupéré chez Newsmada.
Karate-kata Afrika: mpikatroka malagasy 7 mianadahy manao famaranana
Fahombiazana tanteraka ny azon’ireo katitakely miatrika ny fiadiana ny tompondaka an’i Afrika, kata, ho an’ny sokajy latsaky 14 taona. Fifaninanana hampitain-davitra vokatry ny tsy mbola fahafahana manatenteraka hetsika mivantana. Taorian’ny fifanintsanana na­nomboka ny 12 desambra lasa teo, mpikatroka malagasy 7 mianadahy amin’izao ny miatrika ny dingana famaranana amin’ity fifaninanana ity, eo amin’ny “kata individuel”. Raham­pitso alahady 20 desambra 2020 ny ho fantatra izay handrombaka ny fandresena, antenaina fa hahazo izany i Ma­dagasikara. Manan-talenta ary afaka mifaninana tsara amin’ireo mpikatroka afrikanina man­tsy ny karate-ka malagasy, raha ny fahaiza-manaon’izy ireo no jerena. Azo lazaina ho ampy ihany koa ny fanomanan-tena, izay efa nanomboka ny volana oktobra lasa teo, na dia tsy mbola tonga lafatra aza, raha ny nambaran’ny mpandrindra eo anivon’ny federasiona. Ambe­tin-tenin’ireto solontena mala­gasy miatrika famaranana ireto ny hoe “ny fitiavan-tanindrazana dia azo aseho amin’ny endriny maro”. Tsiahivina, nanomboka ny alakamisy teo ary nitohy omaly, ny fakana ny horontsarin’ireo mpikatroka malagasy miatrika famaranana ireo, ezahina hatrany ny hahamatihanina izany, hahazoana vokatra tsara.Mi.RazL’article Karate-kata Afrika: mpikatroka malagasy 7 mianadahy manao famaranana a été récupéré chez Newsmada.
Jejy Music: hanohana sy hampisongadina ireo manan-talenta
Nametraka tetikasa vaovao ny ivontoeram-pampianarana mozika, Jejy Music, ho fampivoarana ny tontolon’ny mozika eto Madagasikara sy ho fanohanana ary ho fampisongadinana ireo manan-talenta, araka ny valan-dresaka nifanaovan’ny mpitantana ity sekoly ity tamin’ny mpanao gazety, omaly teny Andravoahangy Ambony.Tsy misy havahany fa samy homeny tosika avokoa ireo mpiangaly mozika amin’ny karazany rehetra: klasika, jazz, bà gasy, sns. Izany dia amin’ny alalan’ny fikarakarana fampisehoana, fandrindrana ny hira, ny fikarakarana ny lafiny teknika ary amin’ny alalan’ny fanentanana ny olona mba hijery sy hankafy ny talentan’izy ireo.Rehefa misy io sehatra hanehoana talenta io, heverina fa harisika ireo tanora hanatsara hatrany ny fahaizany ka hametraka tanjona amin’izany. Ho sehatra hifanakalozana eo amin’ny samy manan-talenta ihany koa izy ity ka hampivelatra ny zavakanto sy ny kolontsaina malagasy, amin’ny ankapobeny. Marihina fa efa voaomana ny toerana hanatanterahana ny seho: ny efitra Kintana, ao amin’ny Jejy Music etsy Andravoahangy Ambony; ny efitra Isaac Hamone Auditorium, etsy Isoraka ary toerana hafa, araka izay safidin’ilay mpandray anjara.Ankoatra ity tetikasa vaovao ity, manomana seho maromaro, handraisan’ireo mpikambana ao aminy anjara, ny Jejy Music. Hisantatra izany, ny 27 jolay izao, i Tsiky, vao 15 taona monja kanefa manan-talenta amin’ny fitendrena lokanga. Ny “Lokanga amin’ny endriny rehetra” ny lohatenin’ny fampisehoana hotanterahiny. Hanaraka azy, manomboka amin’ny volana aogositra, ireo mpitendry zavamaneno hafa, toy ny mpitendry gitara miisa 40, hiara-hiaka-tsehatra ny 31 aogositra izao. Ho fantatra amin’ny fotoana manaraka ny toerana hanatontosana izany.Landy R. L’article Jejy Music: hanohana sy hampisongadina ireo manan-talenta a été récupéré chez Newsmada.
Voafidy ho vodilaharana mendrika i Mombris
Namoaka ireo mpilalao heveriny fa mendrika nandritra ny andro fahatelo sy fahefatra, tamin’ny fifanintsanana hiadian-toerana ho an’ny “Can 2022” farany teo ny Bein Sport sy ny Telefoot. Tamin’izany no nisafidianan’izy ireo fa ilay Malagasy, i Jerome Mombris, vodilaharana havian’ny Barea de Madagascar ,no “meilleur lateral africain 2020”. Tsiahivina fa anisan’ireo hidin-trano mahatoky an’ny Malagasy i Mombris. Tsy vitan’ny miaro tena fotsiny ny asany eny ambony kianja fa mahavita manao fanafihana ihany koa izay miafara mihitsy amin’ny daka.Mpilalao tsotra filalao ary tsy be resaka loatra i Jerome Mombris, na ao amin’ny Barea de Madagascar na rehefa anontanian’ny mpanao gazety. Mpilalao tompon-toerana ao amin’ny FC Grenoble 38, D2 any Frantsa, ny lehilahy ary efa im-38 voaantso tao amin’ny ekipam-pirenena malagasy.Tsiahivina fa laharana faharoa eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Frantsa ho an’ity sokajy misy azy ity, amin’izao fotoana izao, ny FC Grenoble 38, ilalaovan’i Mombris, manana isa 25, manaraka ny Paris FC, mitarika vonjimaika amin’ny isa 27. TompondakaL’article Voafidy ho vodilaharana mendrika i Mombris a été récupéré chez Newsmada.
Solombavambahoaka : Nirohotra nanohana an-dRavalomanana
Nihaona tamin’ ny filoha Ravalomanana Marc omaly ireo solombavambahoaka, nilaza ny fanohanany ny kandidà laharana faha-25. Tazana tamin’ izany ohatra ny depioten’Ambovombe Androy Milavonjy Philobert, Andriantsizehena Bebin depioten’i Manakara, Randrianarisoa teraka Ramahatodisolomanana Vaonalaroy depioten’i Brickaville, depiote Andriamboavonjy Nantenaina depioten’i Mandoto, Liahosoa Maleman depioten’ Ampanihy, Ratefiarivony Jaona depioten’i Tsaratanàna, ny depioten’i Tsiroanomandidy, depioten’ i fenoarivo,depioten’i Kandreho sy ireo hafa izay mbola tsy tonga nanatrika ny fihaonana . Naharesy lahatra ireto solombavambahoaka ireto amin’ ny fanohanana an’i Marc Ravalomanana ny fahaizany mitantana, ary indrindra ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Nambaran’ ny depiote Liahosoa Maleman mpitondra tenin’ ireo solombavambahoaka tonga nilaza ny fanohanan’izy ireo an’i Marc Ravalomanana ireo, fa « efa nifampiresaka izahay sy prezida Ravalomanana mikasika ny fametrahany ny tena fampandrosoana marina, ary nanaiky izy fa hametraka ny fitsinjaram-pahefana tena izy hampandrosoana ny firenena ». Izany hoe efa tsapan’ireto solombavambahoaka ireto ny fahaiza-manaon’ i Marc Ravalomanana amin’ ny fampandrosoana ny faritra, indrindra raha ny fambolena no resahina. Noho izany dia hampandany an’i Ravalomanana Marc ireto solombavambahoaka ireto, amin’ ity fihodinana faharoa ny fifidianana filoham-pirenena ity. Nambaran’ireo solombavambahoaka ihany koa fa tsy misy tambiny ny fanohanana, fa ny fampandrosoana an’i Madagasikara no tanjona ary Ravalomanana Marc ihany no mahefa amin’ izany hoy izy ireo. Ho an-dRavalomanana Marc kosa indray dia nambarany fa tsy hanao antsirambina ny fahatokisan’ny olona azy izy, ary ny fiaraha-miasa ihany no hany ahavitana mampandroso ny firenena. Tsy nihambahamba rahateo ny filoha Ravalomanana Marc nilaza ny teny filamatra entiny, dia ny finoana sy ny fahatokisana hanondrotana ny firenena. Marihina fa nisy ny fivoriana izay notanterahin’ ireo solombavambahoaka ireo sy ny filoha Ravalomanana Marc, hametrahana ny paikady rehetra amin’ ny fampandaniana ny kandidà laharana faha-25. Iratra Raitra L’article Solombavambahoaka : Nirohotra nanohana an-dRavalomanana est apparu en premier sur .L’article Solombavambahoaka : Nirohotra nanohana an-dRavalomanana a été récupéré chez Triatra.
Misy ny maika no ho ny maika…
Tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, fahasarotan’ny famatsian-drano, tsy fahampian’ny rotsak’orana ho amin’ny fambolena… Inona na ahoana koa? Tsy tambo isaina ny fahasahiranana mahazo ny vahoaka ifotony amin’izao. Zava-dehibe sy maika avokoa, tsy misy azo atao ambanin-javatra na ambin-javatra amin’ity hoe taonan’ny asa.Tsy vitan’izay, eo ny hoe fanarenana ny fiainam-pirenena sy fiainam-bahoaka vokatry ny krizy politika nifandimby saika tsy mahafa-bela hatramin’izay. Miara-dalana amin’izany ny fanonerana ny dingam-pandrosoana tsy tratra sy tsy vita tamin’izany. Amin’izao, atrehina sy imasoana ny fanorenana ho amin’ny ampitso tsaratsara sy mendrika kokoa.Na izany aza, misy ny maika no ho ny maika: ny fahasalamana no hoe voalohan-karena, ny olona no harena. Tsy inona, ohatra, izay filaminana sy fandriampahalemana, raha marary ny vahoaka. Toy izany koa izay mety ho fahamoram-piainana andavanandro na izay hoe famatsian-drano ho an’ny olona na ny voly aza, raha farofy sy osa ny mponina.Anisan’ny ahazoana miantoka izay atao rehetra amin’ny fampandrosoana ny fananana vahoaka salama, matanjaka, mavitrika… Mby aiza? Mbola tsy mahafa-bela aloha ny valanaretina covid-19, na inona fijery sy filaza. Nefa tsy ho rototra firy na efa tsy miraharaha ny ankamaroan’ny olona? Tsy ampy ny fanazavana, fanairana, fanentanana…Miandry inona vao ho tonga saina? Toa tsy mahataitra ny maro, ohatra, izay sazy amin’ny tsy fitondrana arovava. Ny mpitandro filaminana no atahorana fa tsy ny aretina. Ny mpitandro filaminana tokony hanara-maso izany aza, misy tsy te hisahirana: mitazam-potsiny, ao aza ny tsy manao arovava koa. Hahagaga raha goragora be ihany ny raharaha?Toa efa samy manao izay saim-pantany sy izay mahafinaritra azy izao. Ho tonga hatraiza? Difotry ny fiatrehana ny fiainana andavanandro sy ny fitadiavana, ka mila tsy voaavaka intsony izay zava-dehibe, maika, mahasoa? Mila fahendrena fa tsy fahamalinana fotsiny, fampitandremana, fanasaziana… Ho aiza raha tsy salama ny tena?Rafaly Nd. L’article Misy ny maika no ho ny maika… a été récupéré chez Newsmada.